Sexy Elastic Soft Modal အမျိုးသားစီးလက်တိုတို - အခမဲ့သယ်ယူပို့ဆောင်ရေးနှင့်အခွန်အကောက်ကင်းဝယ်ပါ WoopShop®
sexy elasticity ဖျပုံစံများအမျိုးသားများရဲ့ Boxer ဇာတ်လမ်းတိုများ
အရွယ် အာရှ Size ကို XL အာရှ Size ကို L ကို အာရှ Size ကို XXL အာရှ Size ကို XXXL
အရောင် 2Blueyellow 2Blueblack Bluegray 2Blackyellow Light2gray Light2black K009 Blackgray Blueblack Light2blue 2Purpleblack 2Purpleblue K008 2
အာရှအရွယ်အစား XL / 2Blueyellow အာရှအရွယ်အစား L / 2Blueyellow အာရှအရွယ်အစား XXL / 2Blueyellow အာရှအရွယ်အစား XXXL / 2Blueyellow အာရှအရွယ်အစား XL / 2Blueblack အာရှအရွယ်အစား L / 2Blueblack အာရှအရွယ်အစား XXL / 2Blueblack အာရှအရွယ်အစား XXXL /2ဘရောင်စုံ အာရှအရွယ်အစား XL / Bluegray အာရှအရွယ်အစား L / Bluegray အာရှအရွယ်အစား XXL / Bluegray အာရှအရွယ်အစား XXXL / Bluegray အာရှအရွယ်အစား XL / 2Blackyellow အာရှအရွယ်အစား L / 2Blackyellow အာရှအရွယ်အစား XXL / 2Blackyellow အာရှအရွယ်အစား XXXL / 2Blackyellow အာရှအရွယ်အစား XL / Light2gray အာရှအရွယ်အစား L / Light2gray အာရှအရွယ်အစား XXL / Light2gray အာရှအရွယ်အစား XXXL / Light2gray အာရှအရွယ်အစား XL / Light2black အာရှအရွယ်အစား L / Light2black အာရှအရွယ်အစား XXL / Light2black အာရှအရွယ်အစား XXXL / Light2black အာရှအရွယ်အစား XL / K009 အာရှအရွယ်အစား L / K009 အာရှအရွယ်အစား XXL / K009 အာရှအရွယ်အစား XXXL / K009 အာရှအရွယ်အစား XL / Blackgray အာရှအရွယ်အစား L / Blackgray အာရှအရွယ်အစား XXL / Blackgray အာရှအရွယ်အစား XXXL / ဘလက်ဂေး အာရှအရွယ်အစား XL / Blueblack အာရှအရွယ်အစား L / Blueblack အာရှအရွယ်အစား XXL / Blueblack အာရှအရွယ်အစား XXXL / Blueblack အာရှအရွယ်အစား XL / Light2blue အာရှအရွယ်အစား L ကို / Light2blue အာရှအရွယ်အစား XXL / Light2blue အာရှအရွယ်အစား XXXL / Light2blue အာရှအရွယ်အစား XL /2ခရမ်းရောင် အာရှအရွယ်အစား L / 2Purpleblack အာရှအရွယ်အစား XXL / 2Purpleblack အာရှအရွယ်အစား XXXL /2ခရမ်းရောင် အာရှအရွယ်အစား XL /2ခရမ်းရောင် အာရှအရွယ်အစား L ကို /2ခရမ်းရောင် အာရှအရွယ်အစား XXL / 2Purpleblue အာရှအရွယ်အစား XXXL /2ခရမ်းရောင် အာရှအရွယ်အစား XL / K008 အာရှအရွယ်အစား L / K008 အာရှအရွယ်အစား XXL / K008 အာရှအရွယ်အစား XXXL / K008 အာရှအရွယ်အစား XL / 2Purpleyellow အာရှအရွယ်အစား L / 2Purpleyellow အာရှအရွယ်အစား XXL / 2Purpleyellow အာရှအရွယ်အစား XXXL / 2Purpleyellow
Sexy Elastic ပျော့ပျောင်းသောအမျိုးသားများလက်ဝှေ့ထိုးဘောင်းဘီတို - Asian Size XL / 2Blueyellow backordered နှင့်အဖြစ်မကြာမီကြောင့်ပြန်စတော့ရှယ်ယာဖြစ်သကဲ့သို့တင်ပို့ပါလိမ့်မယ်။
ပစ္စည်း: ပုံစံများ, ဝါး Fiber
အရောင်: အနက်ရောင်, Gray, ရေတပ်, ခရမ်းရောင်, ကော်ဖီ
ပစ္စည်း: 95% ဝါး, Fiber 95% ပုံစံများ
ရာသီ: နွေဦးရာသီ, နွေရာသီ, ဆောင်းဦးရာသီ, ဆောင်းရာသီ
မှတ်ချက်: သင်ဝယ်ခင်ဥစ္စာနှင့်အတူအသေးစိတ်အရွယ်အစားနှိုင်းယှဉ်ပါ သငျသညျအရွယ်အစားအကြောင်းကိုသေချာမသိကြပါ။ အရွယ်အစားဥရောပ / အမေရိကန်အရွယ်အစားထက်သေးငယ် 1 ~3အရွယ်အစားဖြစ်ပါသည်, ကျနော်တို့ခါတိုင်းလိုထက် 1 ~3ပိုကြီးအရွယ်အစားဝယ်ယူရန်အကြံပြုအပ်ပါသည်။ 1cm = 0.3937 လက်မ။ ကျွန်ုပ်တို့၏ယူနစ် 1 ~ 3cm.thanks ၏သှဖေကိုခွင့်ပြုစင်တီမီတာပါ!
menesi နှုန်း atvyko ။ kokybe puiki ။ tiko dydis
ဂရိတ်မထိုက်မတန်, အရည်အသွေးကောင်းလက်ဝှေ့သမားဘောင်းဘီတို! အရမ်းဝတ်ဆင်ရန်အလွန်အဆင်ပြေ!
အချိန်ရောက်ရှိလာခဲ့ items ။ အဆိုပါပေးပို့အချိန်တရုတ်ထံမှသြစတြေးလျမှကျိုးကြောင်းဆီလျော်ခဲ့သည်။ အားလုံးအိုကေ။
Très Bien, ကရုဏာ✨